Avast! Internet Security v7.0.1407 + Serial Keys ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Antivirus Softwares » Avast! Internet Security v7.0.1407 + Serial Keys
By နေမင်းမောင်5:58 AM14 comments
Download From Medaifire
Downlaod From Sharebest
အားလုံပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
အကို ဒေါင်းပီး တဲ့အချိန် rar ဖိုင်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် ဗျာ ....
နေမင်းမောင် March 5, 2012 at 3:55 AM
အကို သေချာ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါအုံးခင်ဗျာ .. ဖိုင်ဆိုဒ်က 94.0 MB ရှိပါတယ်အကို .. အကိုဒေါင်းလော့ချတာ ဖိုင်အပြည့် မပါလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကို ..
mg nway hnoung(pianist) March 7, 2012 at 3:40 PM
Avast! ကတော့ တော်တော့် ကို အဆင်ပြေသွားပြီဗျာ။ Exp:date က တော့ 2038 ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
moe kyaw March 9, 2012 at 5:03 PM
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ဒေါ်င်းပြီးတော့တင်လိုက်ပြီ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။အမြဲ အားပေးနေမယ်။
moe kyaw March 9, 2012 at 5:06 PM
ူlicense key ကို adobe reader နဲ့ မဖတ်ဘူး ဖြစ်နေလို့ ကူညီပါဦး။ အမျာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
virus March 23, 2012 at 12:52 PM
ညီမကတော့ ဒေါင်းလို့ကိုမရဘူး.. ညီမစက်ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး
So Na April 2, 2012 at 7:38 PM
Anonymous April 3, 2012 at 1:37 AM
အစ်ကိုရေ Avast! Internet Security v7.0.1407 + Serial Keys ကို ဖြုတ်လိုက်တာ အားလုံးမကုန်ဘူး ကျန်နေတယ် Registry Editor ထဲသွားပြီး ဖြက်တာလည်း မရဘူးဗျာ အဲဒါပြန်တင်လည်းမရ ဖြုတ်လည်းမရ ဖြစ်နေတယ် အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦး..
နည်းပညာကိုcrazy ဖြစ်တဲ့လူငယ်ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ကိုနေမင်းမောင်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ bookmark လုပ်ထားတယ်။ ဒါဟာလောကကောင်းကျိုးပြုလုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါဘဲ။ ပို့စ်တွေကောင်းတယ်။ ပို့စ်တင်တဲ့အချိန်တွေက ညဉ့်နက်သန်းခေါင်။ လိုင်းကလည်းဒီအချိန်မှာကောင်းတာကိုး။ ဒါ့ကြောင့်ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါ။ ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အားတွေလိုတယ်လေ.......
အောင် April 18, 2012 at 6:32 PM
update လုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ် ဗျာ ။ အဆင်ပြေရင်ပြောပြပေးပါ ၊ အားပေး လျှက် bblackprince8@gmail.com
ကိုမိုးကောင်ကင် ခင်ဗျာ အကုန်ဇြုတ်လိုမရရင် your uninstaller နဲ ဖြုတ်လိုက်ပါ အဆင်ပါလိမ်မယ်
မောင်ချစ်ကိုဦး April 14, 2013 at 10:58 AM
အစ်ကိုေ၇ လင့်တွေ သုံးခုစလုံးသေနေတယ် ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး ပြန်တင်ပေးပါအုန်းနော်